I-Texas T Bed and Breakfast - I-Airbnb
I-Texas T Bed and Breakfast
Yiza kwiLizwe laseTexas Hill kwaye uhlale kwindawo efihlakeleyo yaseTexas enemixholo yesigidi seedola. Ime ngaphandle nje komda wesixeko saseLlano kwaye iphakathi kweekhilomitha ezingama-50 kwiindawo ezininzi zewayini, amachibi, kunye neendawo zokuthenga.
Ikhabhinethi inebhedi yokumkanikazi, ifriji, uluhlu / i-oveni, i-microwave, iscreen esicaba TV/DVR, ubushushu/A/C, iifeni ezimbini zesilingi, unomathotholo/umdlali weCD, ishawa, iitawuli ezixhotyisiweyo kunye neelinen kunye nezinto zangasese, intsimbi/ibhodi yokuayina, isomisi seenwele, kunye nesidlo sakusasa selizwekazi.
Ikhaya lomninimzi kunye ne-Texas T Bed and Breakfast cabin ibekwe kwiihektare ezine zomhlaba kwaye kwenye yezona nduli ziphakamileyo ezijikeleze iLlano kwaye inika umbono omangalisayo kunye nobuhle belizwe elineenduli.
Ikhabhine ibekwe kufutshane nekhaya leenginginya kwaye ziya kufumaneka nokuba ngumntu okanye ngomnxeba ukuba ufuna uncedo ngokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Llano